Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta lagu wadaa in Magaalada Muqdisho uu ka furo Kalfadhigii 8 aad ee Baarlamaanka Somaliya – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta lagu wadaa in Magaalada Muqdisho uu ka furo Kalfadhigii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka Somaliya, xilli shalay uu baaqday furitaanka Kalfadhigan.
Sida uu shalay sheegay Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Madaxweynaha oo shalay mashquul ku jiray awgeed ayaa dib loogu dhigay furitaanka Kalfadhiga.
Sida uu qabo Dastuurka dalka u yaal Madaxweynaha Somaliya ayaa furi kara, soona xira kara Kalfadhiyada Baarlamanaka Somaliya, halkaasi oo uu ka jeedin doono Khudbad ku aadan xaalada dalka uu maraayo.
Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ayaa shalay lagu wargeliyay inay soo xaadiraan 9:00 Subaxnimo si loogu sii diyaargaroobo furitaanka Kalfadhigan oo ah kii ugu dambeeyay.
Sababta shalay uu u baaqday Kalfadhiga Baarlamaanka ayaa ahaa in Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu Villa Somaliya ka furay Shir looga hadlaayo arimaha Doorashada dalka ka dhaceysa sanadkan 2016-ka.
Ammaanka Xarunta Baarlamaanka Somaliya iyo Aaga Madaxtooyada ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana wadada la dhigay ciidamo Boolis ah oo ammaanka sugaya, iyadoo gabi ahaanba gaadiidka rayidka loo diiday isticmaalka wadada.
Baarlamaanka Somaliya ayaa waxaa hor yaallo sharciyo badan oo u baahan in la meel mariyo, xilli 4 bilood kaliya ay u dhiman tahay Baarlamaanka hada shaqeeya.